किन बढिरहेको छ आत्महत्याको ग्राफ ? दुई वर्षमा १५ हजारले गरे आत्महत्या ! | News Dabali
किन बढिरहेको छ आत्महत्याको ग्राफ ? दुई वर्षमा १५ हजारले गरे आत्महत्या !
July 27, 2017 | 1:01 am
काठमाडौं । नेपालमा आत्महत्याको अवस्था डरलाग्दो हुन थालेको छ । झुन्डिएर, विष सेवन गरेर, हाम फालेर तथा आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर गत वर्षको साउनयता ५ हजार ७ सय ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसमा आफ्नो शरीर दाह गरेर २२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्यांकअनुसारएक वर्षमा देशभर गरी २२ जनाले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएका छन् र देह विसर्जन गरेका छन् ।
ज्योतीका श्रीमान राजिव झा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा थिए । सासूसँग भएको झैझगडाको कारण ज्योतीले आत्महत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसैगरी ०७३ जेठ ७ रुपन्देहीको तम्हरिया ७ की २२ वर्षीया गिता लोधले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएर आत्महत्या गरिन् । घरका परिवार सुतेका बेला राति सुत्ने कोठामा आगो लगाएर उनले जिन्दगीको दौडधूप टुंग्याएकी हुन् ।
डीआईजी भट्टका अनुसार यस्तो समस्या २२ देखि ३० वर्षका विवाहिता महिलामा धेरै छ । “श्रीमानका कारण, घरमा सासूका कारण शरीरमा आगो लगाउने, आत्महत्या गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखियो । सहनै नसक्ने कुराको आरोप लगाएपछि महिलाले आवेशमा आएर आफ्नो शरीरमा आगो लगाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ,” भट्टले भने ।बाह्रखरीबाट